रुपन्देहीका अस्पताल संक्रमितले भरिए, भुइँमै सुताएर उपचार :: Setopati
भगवती पाण्डे बुटवल, बैशाख २२
दिनप्रतिदिन गम्भीर अवस्थाका कोरोना संक्रमित थपिँदै जान थालेपछि रुपन्देहीका अस्पतालहरुले थेग्नै नसक्ने भएका छन्। कोरोना संक्रमितहरुको उपचार भइरहेका बुटवल र भैरहवाका सबै अस्पतालका बेड भरिएका छन्।
बेड खाली नहुँदै सिकिस्त अवस्थाका नयाँ विरामी आएपछि अस्पतालहरुले भुइँमै फर्म बिच्छाएर विरामीहरुलाई अक्सिजन चढाउने गरेका छन्। बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र भैरहवाको भिम अस्पतालमा विरामीहरुको अत्यधिक चाप हुने गरेको छ।
बुधवार मात्रै रुपन्देहीका विभिन्न अस्पतालहरुमा २ सय ७ जना सिकिस्त अवस्थाका संक्रमितहरुको उपचार भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख डा. राजेन्द्र गिरीले जानकारी दिए। गिरीले बैशाख लागेसँगै गाउंघरमा हुने गरेका विवाह, व्रतबन्ध, चौरासी पूजा जस्ता सामाजिक संस्कार मनाउने क्रममा संक्रमण घरघरमा फैलिएको बताए।
भैरहवास्थित भिम अस्पतालमा रहेका आइसियू र एचडियू सबै बेड भरिएपछि अस्पताल आउने संक्रमितलाई भुइँमै राखेर उपचार गर्न शुरु गरिएको छ। भिम अस्पतालमा २५ बेडको एचडियू, ५ बेडको आइसियू र ४ वटा भेन्टिलेटर रहेका छन्। एचडियू र आइसियूका सबै बेड भरिएपछि ११ जना विरामीलाई भुइँमै फर्म विच्छाएर उपचार शुरु गरिएको गिरीले जानकारी दिए।
त्यस्तै बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालका पनि सबै बेड भरिएर विरामीहरुलाई अस्पतालको फिभर क्लिनिक र इमरजेन्सीमा समेत राख्ने गरिएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमले कोरोना अस्पतालको ३६ बेडको एचडियू, १५ बेडको आइसियू र ७ बेडको फिभर क्लिनिक भरिएर इमरजेन्सीमा समेत अक्सिजन दिएर राख्ने गरिएको बताए।
‘कोरोना अस्पताल र फिभर क्लिनिकका कुनै पनि बेड खाली छैनन्, शरीरमा अक्सिजनको कमी भएर आत्तिदै आएका विरामीहरुलाई इमरजेन्सीको भुइँमै राखेर भएपनि उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ’ उनले भने।
लुम्बिनी प्रादेशिक र भिम अस्पतालसँगै भैरहवाको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साईन्सेज (युसिएमएस), मणिग्रामको क्रिमसन अस्पताल र देवदह मेडिकल कलेजले पनि कोरोना संक्रमितहरुको लागि बेड छुट्याएर नै उपचार शुरु गरेका छन्।
यूसिएमएसको एचडियूमा ५५ जना, आइसियूमा २ जना भेन्टिलेटरमा ७ जना संक्रमितको उपचार भईरहेको छ। त्यस्तै इमरजेन्सी आइसोलेसनमा ३१ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। यूसिएमएसले कोभिडका विरामीको लागि अक्सिजन सहितका १ सय ४७ वडा बेड छुट्याएको भएपनि अक्सिजन अभाव हुन थालेपछि विरामी भर्ना गर्न नसकिएको अस्पतालले जनाएको छ।
अस्पताल प्रशासनका अनिल अर्यालले अस्पतालमा दैनिक ७ देखि ८ सय सम्म ठूलो सिलिण्डरको अक्सिजन चाहिने भएपनि बुधवार चारसय सिलिण्डर मात्रै अक्सिजन उपलब्ध भएपछि विरामी राख्न नसकिएको बताए। ‘शुरुमा ६५ बेडबाट कोभिडका विरामीको उपचार शुरु गरिएपनि अहिले बेड बढाएर झण्डै एकसय ५० पुर्याएका छौं, अक्सिजन सहज रुपमा उपलब्ध हुन सके अझै ३० जना भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भर्ना गर्न सकिन्छ’ अर्यालले भने।
मणिग्रामस्थित क्रिमसन अस्पताल पनि कोभिडको लागि छुट्याएका सबै बेडमा संक्रमितले भरिएका छन्। अस्पतालले १० बेडको एचडियू, ५ बेडको सिसियू र एउटा भेन्टिलेटर कोभिडका विरामीको लागि छुट्याएको जनाएको छ। छुट्याएका सबै बेडहरु विरामीले भरिएका छन्। त्यस्तै देवदह मेडिकल कलेजमा पनि चारजना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ।
विरामीको चाप थेग्नै नसक्ने अवस्था आएपछि अस्पतालका पेटी र गल्लीमा समेत संक्रमितलाई राखेर उपचार गरिएको छ। हेर्दै कहालीलाग्दो अस्पतालका दृष्यले त्यहां जाने विरामी र आफन्तको मन क्षतविक्षत बनाउने गरेको छ। संक्रमितले बेड पाउनै ३/४ दिन पालो कुरेर बस्दा उनीहरुको मृत्यु भइसक्छ।
भिम अस्पताल भैरहवाका डा. नारायण पोखरेलले बेडमा रहेका विरामीहरु संक्रमण मुक्त भएपछि वा मृत्यु भएपछि बल्ल अर्को विरामीले बेड पाउने अवस्था रहेको बताए।
बेड अभाव भएपछि सिद्धार्थनगर नगरपालिका ९ का वडा अध्यक्ष शेषकान्त भण्डारी पनि भुइँमै बसेर उपचार गराईरहेका छन्। अन्यत्र बेड खोजिरहे पनि नपाएपछि अस्पतालको भुइँमै फर्ममा बसेर उपचार गरिएको उनले बताए।
अस्पतालमा अहिले ४० जना कोभिडका विरामी उपचाररत छन्। कोभिड कक्षतर्फ ४ जना आइसियुमा, १८ जना एचडियुमा रहेका छन् भने बाँकी विरामी आकस्मिक कक्षमा उपचाररत छन्।
भएको जनशक्तिले कोभिडको उपचार गरेपनि अहिलेसम्म फिजिसियन आएका छैनन्। ८ जना मेडिकल अफिसर १४ जना नर्स र कार्यालय सहयोगीबाट उपचार भइरहेको अस्पताल प्रशासनले जानकारी दिएको छ।
संक्रमितको संख्या थपिएजस्तै मृत्यु हुनेको दर पनि रुपन्देहीमा उच्च हुंदै गएको छ। बुधवारसम्म रुपन्देहीमा २ सय ३३ जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांक छ। त्यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि ५ हजार नजिक पुगिसकेको छ।
संक्रमित बढ्दै जांदा लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडका विरामीहरुको उपचारको लागि अस्थायी अस्पताल बनाउने योजना अगाडि सारेको छ। बुधवारमात्रै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको पदभार लिएका मन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले कोभिड संचालनको लागि बुटवलका केही भौतिक संरचनाहरु हेरिएको र विहीबार त्यसैको लागि सर्वपक्षिय छलफल राखिएको बताए।
‘हाम्रो पहिलो काम नै कोभिड नियन्त्रण र विरामीहरुको उपचारको लागि हुने छ, अहिले संचालनमा रहेका अस्पतालले विरामीहरुको चाप थेग्न नसक्ने भइसकेका छन्, छिट्टै अरु कुनै भौतिक संरचनामा भएपनि विरामीहरुको उपचार गर्ने प्रबन्धमा जुट्ने छौं’ उनले भने।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख २२, २०७८, २०:०२:००